BlackBox: Maareynta Halista ee ESPs ee La Dagaalanka Qaswadayaasha | Martech Zone
BlackBox: Maareynta Halista ee ESPs ee La Dagaalanka Spammers-ka
Axad, Oktoobar 19, 2014 Douglas Karr
BlackBox wuxuu isku sifeeyaa inuu yahay xog ururin, si joogto ah loo cusbooneysiiyey ku dhowaad cinwaan kasta oo emayl ah oo si firfircoon loo iibsado loona iibiyo suuqa furan. Waxaa si gaar ah loo isticmaalaa by Email Bixiyeyaasha Adeegga (ESPs), si loo sii go'aamiyo haddii liiska soo diraha uu ku saleysan yahay ogolaansho, spammy ama sun toos ah.
Dhibaatooyinka badan ee emayllada adeeg-bixiyayaashu ku dhacaan ayaa ah kuwa wax basaasa oo habeen-habeen ah oo iibsada liis ballaadhan, ku soo dejiya barxadooda, ka dibna u soo diro iyagoo og inayna haysan wax fasax ah. Waxay ogyihiin in u dirista liistada ay abuureyso tiro cabashooyin ah oo laga yaabo inay ka saaraan boosteejada emaylka - laakiin waxay halkaas u joogaan inay ka helaan emaylkii ugu horreeyay. Liis garaynta liiska kuma saabsana abuurista xiriir!
Dhibaatada tan ayaa ah in adeeg bixiyaasha emailka ay sumcad ku leeyihiin shirkadaha bixiya adeegga internetka (ISPs). Haddii ISPs ay arkaan raashin cabasho ballaaran oo ka imanaya mid ka mid ah server-yada emaylka, way samayn doonaan xannib dhammaan emaylka ka imanaya adeegahaas! Taasi waxay ka dhigan tahay in macmiil kasta oo haysta email uu ka soo dirayo server-kaasi uu saameyn ku yeelan karo… adiga ayaa noqon kara!
Adeegsiga adeeg sida BlackBox Caqli ahaan, waxaan ku kalsoonahay in soo diraha uu saadaalin karo halista la xiriirta macmiil cusub oo soo socda. ESPs waa inay taxaddaraan, in kastoo. Waxaan haystay ESP mar ii sheeg in liistadaydu dhaaftay marinka waana inaan la doodo iyaga. In kasta oo aanan iibsan liis, haddana waxaa ku jiray cinwaannada e-mayl igu filan liistadayda oo u dhigma mid ka mid ah xog-ururinnadaas oo la iigu calaamadeeyay inaan ahay spammer - HALKAN xaqiiqda ah inaan ogolaansho haystay oo aan dirayay sannado. Aakhirkii way ka tanaasuleen, waxaan u diray liiskayga oo cabashadaydu waxay ahayd 0%.
Xusuusnow, kani ma aha xog-ururin cinwaannada emaylka ee aan la geyn karin, mana aha liistada cinwaannada emaylka ee sida cad aan rukhsadda u haysan. Waa cinwaannada emaylka ee sida caadiga ah iibsaday oo la iibiyay adoo adeegsanaya liiska liistada. Aad ayaan ugu kalsoonahay in cinwaanka iimaylkaygu kujiro Blackbox… laakiin runti waxaan iska diiwaan galiyaa boqolaal joornaal.
Tani waa adeeg qiimo u leh ESP kasta oo dhibaato ku qaba spammers baabiiya sumcadooda!
Tags: sanduuq madowliiska madowcinwaanka emailkacinwaanka emailka sirdoonkaemaylka liiska madowgaarsiinta emaylkasumcadda emailkaqiimeynta khatarta emaylkamaareynta khatarta emaylkaadeeg bixiyaha adeegga emaylka
Iyadoo aan la helin Raadinta Wicitaanka, Ololahaaga Asteynta ayaa sii kordheysa oo aan sax ahayn
Qalab Weyn oo Lagu Xaliyo Dhibaatooyinka Xeerarka Google Analytics